One Click Complex - Min Oaker
pc software One Click Complex
One Click Complex
by U Oo Cracker on 10:43 AM in pc software
အခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ “Tool” လေးတစ်ခုကိုတင်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Tool နာမည်ကတော့ “One Click Complex” လို့ပဲလွယ်လွယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲ့ဒီ Tool မှာပါဝင်တဲ့ Main -Function Title ကို နှစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်..။
Windwo Section နဲ့ Android Section ဆိုပြီးတော့ပါ။
ဒီTool လေးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
For Window Section
1 . သင့်ရဲ့PC မှ Click တစ်ချက်ခေါက်ရုံမျှဖြင့် Wifi-Hostpot လွှင့်နိုင်သည်။
2. သင့်ရဲ့ PC Hardware & Software Information အချက်အလက်များကို အသေးစ်ိတ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။
3. သင်သုံးသမျှကို နောက်ကွယ်ကနေ Cache File တွေ Junks Files တွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ပစ်ပေးနိုင်သည်။
4. PC Shutdown လုပ်ခြင်း။
5. PC Restart လုပ်ခြင်း။
6. သင့် PC ရဲ့ Mac လိပ်စာကို ပြသပေးသည်။
7. သင့် PC ရဲ့ အသုံးပြုနေသော IP ကိုဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်းတိ်ု့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ...။
For Android Section
8. Click တစ်ချက်နှိပ်ရုံမျှဖြင့် မည်သည့် Android ကိုမဆို 100% Myanmar Font အမှန်သွင်းပေးပါသည်။
(Vs: 1.6 to 5.1) အထိမှန်ကန်စွာသွင်းနိုင်ပါသည်။ (Keyboard လက်ကွက်အပါအဝင်)
9. သင့်ဖုန်း Patterm Lock ကိုဖြုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ( Only Rooted )
10. သင့်ဖုန်း Passwrd ကိုဖြုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ( Only Rooted )
11. Apk မှန်သမျှကို အလွယ်ကူဆုံးသောနည်းဖြင့် Myanmar
မှုပြုနိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်အပြင်အခြားပြုလုပ်နိုင်သည် Function များစွာပါဝင်ပါသည်။
12. Click တစ်ချက်တည်းဖြင့် PC အတွင်းရှိလိုအပ်သော App များကို အလွယ်တကူတစ်ပြိုင်နက်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ( ပထမဦးစွာ New Folder ခေါ်ယူပြီး... Name မှာ Apps ဟုမှတ်သားပြီးမှ သင်လိုချင်သော Application တွေကိုထည့်သွင်းပြီး Install ရယူနိုင်မှာပါ။ )
13. Fastboot ဝင်ရခက်သော Smart Phone တွေအတွက် အလွယ်တကူ Fastboot Mode သို့ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
14. Samsung Android Smart Phone များအတွက် Frimware တင်နိုင်ရန် (Downloading Mode) လျှင်မြန်စွာဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။
Remark ။ ။
ဒီBatch Toolလေးကိုရေးတဲ့အချိန်ကအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်တောင်အနည်းဆုံး 32 Hrs ကြာပါတယ်... ( :p )
Tool Developed =Chan Myae Maung
Tool Version =2.1
File Size =19.4 MB
App Password =21041997
By U Oo Cracker at 10:43 AM